सपनाहरु | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
तपाईं सपनामा डराउनु भएको कुन सपनाहरू?
किन सपना यदि तपाइँ सपना मा गाली छ, हप्काउनुभयो ???? किन धेरै केटाहरूले तपाईंको सपना देख्छन् रमाउनेछन्, रमाइलो गर्नुहोस् एक सपना जसमा तपाईं कसैसँग बहस गर्दै हुनुहुन्छ शोकको चेतावनी दिन्छ कि ...
एक जिप्सी आश्चर्यचकित सपना कस्तो छ?
म किन सपना देख्छु कि एक जिप्सी महिला आश्चर्यजनक छ? भाग्य बताउने सपनाले तपाईंलाई केही महत्त्वपूर्ण र लामो ढिलाइ भएको व्यापारको सम्झना गराउँछ। यदि एउटी केटीले यो सपना देख्छ भने, उसले निर्भर गर्नु पर्दछ ...
सपनामा मैले "मेरो मृत्यु" को मिति भेट्टायो
सपनामा मैले "मेरो मृत्यु" को मिति पत्ता लगायो र कुन वर्ष? तोकिएको छैन। सामान्यतया, सपनामा मृत्युले लामो आयु दिन्छ। र मर्नु भनेको जीवनमा तपाईंको उद्देश्य परिवर्तन गर्नु हो। नमस्कार म ...
एक सपना मा एक सानो बिरालाको बच्चा स्ट्रोक ... यसको मतलब के हो?
एक सपना मा एक सानो बिरालाको बच्चा स्ट्रोक ... यसको मतलब के हो? बिरालाले पूरै अवस्थाको अस्थिरता, अस्थिरताको विशेषता दिन्छ। साथै कुनै पनि व्यक्तिको स्त्री, सहज पक्ष। यौन सम्बन्धको लागि इच्छा। कालो बिराला बेहोसको रूपमा देखा पर्दछ ...
निद्रा किन छातीको माछाको सपना?
निन्द्रा गँड्यौला माछाको सपना के हो? कुराकानीहरू र लाग्ने अप्रिय गफ। माछा - गर्भावस्थामा! सपनामा माछा सामान्यतया यौन इच्छा, जननांग, हर्मोन, आदि संग सम्बन्धित छ।
मलाई भन्नुहोस्, किन पहेंलो dandelions को सपना? धन्यवाद
मलाई भन्नुहोस्, किन पहेलो dandelions सपना देख्नुहुन्छ? धन्यवाद सामान्यतया, सपनामा फूलहरू - जगाउने समस्याहरू, केहि द्वन्दहरू। तर सपना खाली हुन सक्छ - त्यस्तै सपना देख्नुभयो। विशेष गरी ...
कैदबाट भाग्नुको सपना किन ...
कैदबाट भाग्ने सपना किन ... तपाईको जीवनमा कुनै किसिमको गाह्रो परिस्थिति छ र तपाई उम्कन सक्नुहुन्न ... तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्नेमा श doubt्का गर्नुहुन्छ र यो समस्याले जान दिदैन ...
सपनामा ठूलो माछा?
किन सपनामा ठूलो माछा देख्नुहुन्छ? प्रियजनको बिमारी यदि तपाईं सफा पानीमा माछाको सपना देख्नुहुन्छ भने, सपनाले भाग्यले तपाईंलाई उदारतासाथ दिनेछ भनेर बताउँछ। सपनामा देखाइएको मरेको माछाले ...
आकाशमा पक्षीहरूको सपना, के गर्न?
आकाशमा चराहरूको सपना देखे, किन? सपनाहरूको व्याख्या गर्ने एबीसी चराहरूको रचनात्मकता, कल्पनाको उडानको प्रतीक हो। कहिलेकाँही एक चेतावनी कि सपना देख्ने व्यक्ति वास्तविकताबाट धेरै टाढा हुन्छ। खोरमा चरा हेरेकोमा प्रतिबन्ध छ ...
यदि सपनामा तपाईं जेलमा हुनुहुन्छ र त्यसबाट बाहिर जानुहुन्छ भने के हो?
यदि सपना मा तपाईं जेल मा बस्न र यो छोड्न, यो के को लागी हो? सायद वास्तविक जीवनमा तपाईंसँग अघुलनशील समस्याहरू छन्, दुवै बाह्य र आन्तरिक ... स्पष्ट रूपमा तपाईंले उही भेट्टाउनुहुनेछ ...
सपना किन म समुद्रमा तैरिरहेको छु?
किन म समुद्रमा पौडीरहेको सपना देख्छु? समुद्र पानी हो। कुराकानी र तपाईं। यदि पानी शुद्ध छ, तब राम्रो, यदि हैन, नराम्रो। यदि तपाइँसँग तपाइँको अवतार मा जस्तै sisiks छ भने ...
एक भाइको मृत्यु कस्तो सपनामा छ?
सपनामा भाईको मृत्युको अर्थ के हो? लामो समय बाँच्नेछ! यदि तपाईंको कुनै प्रियजनले मृत भएको सपना देख्यो, वास्तवमा तपाईंले केही प्रकारको परीक्षण सामना गर्न तयार हुनुपर्दछ, हुनसक्छ घाटा पनि। यदि तपाईंले सपना देख्नुभयो भने ...
कुन सपनाहरू सीढ़ीहरू देखिन्छन्? प्रायजसो सुत्न दोहोरिन्छ।
भ the्या downमा खसेको सपना किन? सपना अक्सर दोहोरिन्छ। डेनिस लिन फल्पि ourselves द्वारा लिइएको एउटा छोटो सपनाको किताब आफैं वा जीवनमा नियन्त्रणको घाटा। हामी हिंड्न सिक्यौं भने हामी अक्सर खस्छौं। अवस्था जब "पृथ्वी गयो ...
किन आफूलाई लुगा कपडामा सपनामा देख्नुहुन्छ?
किन आफैंलाई कालो वस्त्रमा सपना देख्नुहुन्छ? सपना जसमा तपाईले लुगा देख्नुहुन्छ दुबै नकारात्मक र सकारात्मक अर्थ हुन सक्छ। यो सबै कसरी यो निर्भर गर्दछ ...
एक प्रियको मृत्युको कुन सपनाहरु? र शरीर एक सपना मा छैन, केवल एक प्यार को मृत्यु को ज्ञान।
किन एक प्रियजनको मृत्यु सपना देखिरहेको छ? यसबाहेक, सपनामा शरीर छैन, केवल प्रियजनको मृत्युको ज्ञान। एक मजबूत विवाहित जीवनको लागि सपनामा मृत्युको बारेमा सुन्नु खराब सपना होईन, सायद ...
कच्चा माछाका के सपनाहरू?
किन कच्चा माछा सपना देख्नुहुन्छ? गर्भावस्था को लागी जीवित र पनी सबै कच्चा छैन, कि हो, मरे तर अझै सडेको छैन - कुनै प्रकारको समस्या वा बिमारी को लागी, तर केहि गम्भीर छैन ...
यो प्रायः एक सपना हो जसमा सबै दाँतहरू रगत बग्छ।
प्राय: यस्तो सपना हुन्छ जहाँ र दाँत बिना सबै दाँतहरु खस्छन्। तपाईंको साथीहरूलाई केहि हुनेछ, रगतको आधारमा होइन। दाँत गुस्ताव हिन्दमान मिलर एक साधारण सपना जसमा तपाईले दाँत देख्नुहुन्छ ...
सबैभन्दा राम्रो मित्रको साथ चुंबनको सपना कस्तो छ?
किन तपाईंको सबैभन्दा मिल्ने साथीसँग चुम्बनको सपना देख्नुहुन्छ? चुम्बन - प्राप्त गर्न - एक प्रियजन देखि अलग; दिनु - आपसी प्रेम; rip off - तातो प्रेम; हावा पठाउन - आज्ञाकारिता। बिदा गर्न यदि ...
कहिलेकाहीँ पूर्वले एक सपनालाई माया गर्छ?
यसको अर्थ के हो जब एक भूतपूर्व प्रियले सपना देख्छ? भूतपूर्वको बारेमा ex०% सपनाहरु सोच्दछ किनकि यो अत्यन्त प्रभावशाली र मनोवैज्ञानिक डेटि dating र सेक्स हो। यसैले म सपना देख्छु र गर्दछु ...
विमान दुर्घटनाको बारेमा सपना देखियो। के लागि?
मैले विमान दुर्घटनाको सपना देखे। के को लागि? झर्ने विमान हृदयको बेहोशको लागि दृश्य होईन। जे भए पनि यो वास्तविकतामा हुँदैन, तर सपनामा। सपनामा, तपाई पतन, हवाइजहाजको विस्फोटन देख्न सक्नुहुन्छ।
76 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,562 प्रश्नहरू।